Telecommunications Station Anundgård hoos u dhigay – Gadaal u on qarnigii tegey | Holmbygden.se
Telecommunications Station Anundgård hoos u dhigay – Gadaal u on qarnigii tegey
Posted on 16 February, 2017 by Holmbygden.se
Anund Manor sarrifka telefoonka jira
Telecommunications Station Anundgård hadda waxay leedahay "ka hor taariikhda ugu wanaagsan". Iyadoo qayb ka ah xirxirin network copper ah guud ahaan dalka ayaa hadda Telia go'aansaday in la qaato stationen ur drift efter 100 år i aktiv tjänst. Xidhitaanka saameeyaa dhammaan macaamiishu kuwaas oo ah Macmiil taleefoonka guriga via Jack telefoonka, in Telia ama shaqaale kale.
sano 2012 waxa lagu dhawaaqay in Telia lahaa hoos saldhigga telefoonka ee Loviken ah. Hadda waa saldhigga isgaarsiinta i Anundgård taas oo ka dibna uu arkay maalmood ay ugu fiican. Sida fursadaha kale ee isgaarsiinta badan iyada oo loo marayo shabakad jir ah copper ayaa la wareegay ka badan-oo-badan oo sidaas sii Group Telia ay muddo sanado ah qaar ka mid ah hadda in geeddi-socodka lagu kala dhantaalay oo dhan is dhaafsi telefoonka jir ah in ay mar dambe loo arko faa'iido. Anundgård Idaacadda waa la xiri doonaa wanaag 2018-04-03.
fursado cusub, oo ay ku jiraan Fiber Holm
Waayo, kuwa hadda leeyihiin phone guri via network copper ah in aad rabto in aad sii jira fursado kala duwan. Haddii aad si aad u hesho fiber rakibay marayo "Holm Fiber" (Obs! warbixinta halkan!) si aad u isticmaali karto ka mid ah shaqaale kasta waa in ay doortaan Servanet (in wada dhisi doonaa network fiber la Fiber Holm).
badiilka ah in isagoo taleefoonka guriga ka badan fiber, waxaa la “taleefoonka guriga network mobile”. On ay website, Telia gacanta allmän information med frågor och svar TIXRAACA xiritaanka ("Networks Future") iyo sina egna erbjudanden haddii aad go'aansato in aad joogtid (ama saxiixdo) Telia.
haddii kale, Telekområdgivarna adeegga macaamiisha side-dhex-dhexaad ah oo kaa caawin kara in aad wax u xalliso iyo waxa aad ka fiirsan ka hor inta aadan iibsan Macmiil.
Anund Farm sarrifka telefoonka kowaad wuxuu ahaa in dhismaha this, kaas oo muddo sanado ah qaar ka mid ah ayaa sidoo kale ku yaaliin ganacsi.
Taariikhda dhaafsi telefoonka i Anundgård
The sarrifka telefoonka gacanta laga marka hore i Anundgård dhisay ee 1910s daahay. Idaacadda ayaa markaas ahaa 50 bari ah sarrifka telefoonka maanta (ku yaal xagga bari 700m kiniisadda). Stationsbeteckningen waqtiga ahaa "Östbyn", Sidoo kale go'an yar yahay saldhigga i Anundgård. The "wareejin buuga" waxaa inta badan ay bixiyaan Holm ayaa midiidinka u gaar ah, Maria "Maja" Hjerpe (dhashay Viklund, 1912).
ku dhowaad 1920 Marka taleefoonka Holm ahaa in ay bilaw, waxa uu ahaa, waxa uu ahaa aabbe koriya Maja ee Pelle Haglund kii sameeyey ku biiro, laakiin mar hore 13 sano jir ah, waxa uu ahaa Maia ku lahaa si ay ula wareegaan orodkii. Waxay daryeel oo ka mid ah isbedel marsho buugan in Holm qaaday ilaa idaacadi ugu horeysay oo si toos ah iyo qalabka telefoonka dheeraad ah oo casri ah dial wareegay hawsha Holm, dhexe ee 60 ee.
Sawir saldhigga sarrifka ah 40 macaamiishu st eegay waqtigan. Inay isku Manor ah, Anund marsho ugu horeysay u eegay.
Ka hor inta qalabaynta waxaa shaqeeyay si marka aad u doonayay inuu u soo yeedho meel ma marka hore aad bilowdo cranking telefoonka iyo dukaamada waaweyn ee kor. Tan iyo markii ay ku jawaabay Maja "Anundgård" dhamaadka kale ka dibna lahaa in aad weydiisato in lagugu xiro at. ayaa laga yaabaa in ay sidoo kale dhici karto inay maqlaan ka qoreen marmar on tuulada iyada oo shaqo this.
sawirka t.v. arkay mid ka mid ah heshiiska shaqada Maja ee loo marayo sano ah, "Heshiis ku saabsan maamulka saldhigga sarrifka qalabka call si ay dadweynaha iyo telegrams duulaan" ka 1935. Waxaa, iyo waxyaabo kale in saldhigga u noqon lahaa söckendagar furan (maalmaha) at 8-20. saacadood kuwa ka baxsan aad lahayd in la raadiyo qaab kale oo wada xiriir haddii aad doonayso inaad si loo helo qof. Axadda, idaacadda ayaa la xidhay adeega subax at the 10-13 iyo casho Sunday at 16-18. Intaas waxaa sii dheer, images aad hoos ku arki kartaa in mushaharka shaqada sida agaasimaha idaacadda isgaarsiinta ahayd 40 karoon / sanadkii iyo Macmiil-. Iyo sida ay "telefoonka" sida tirada macaamiisha ee 1935 sida 15 st, kaas oo noqon doona mushaar bille ah oo aad u yar 50 kr.
(Riix sawirrada si aad u ballaadhiyo)
Waayo, kuwa aan haysan telefoonka guriga si ay u tagnay sidoo kale booqo xafiiska Beddelashada haddii aad doonayso inaad telefoon. On jidka wuu idinku soo bixi lahaa si aad ugu bixiso tago 15 dinaar in qoriga u madow yihiin sida arkay on image hoos ku qoran. Sawirka la mid ah waxaa sidoo kale arkay buug on saldhigga Sweden ee Qori sano qorin 1919. bogga 120 waxaan ka heli "Östbyn".
Maja ku noolaa nolol xafiiska telefoonka ugu horeysay ee. Dhamaadkii qarnigii 40aad dhisay bari a newer maqalka Buugga 100m. Maanta waa gabadheeda oo ku nool saldhigga isgaarsiinta ugu da'da weyn, halka wiilkeeda nool labaad ee ugu da'da weyn.
Anund Manor xarunta labaad bedesheen. Behind uu furmo suuqa inay xaq u ahaa marsho buuggan, qolka tagay waxaa ka mid ah, aad wici karto haddii aad telefoonka adiga kuu gaar ah guriga
Bartamihii 60s-la dhisay sarrifka telefoonka si toos ah ugu horeysay Holm ayaa (Dhismaha ma sii jirto), Wakhtigan ee u dhexeeya labada sheegnay. In hore 80 ayaa la dhisay saldhigga isgaarsiinta ee loo isticmaalo ilaa maanta. In bartamihii / dabayaaqadii 90 ee, muddo dheer ka hor YouTube, Facebook iyo Google wuxuu arkay iftiinkii, waxa ay ahayd iyada oo saldhigga telefoonka badan Holmbor uu ugu horeysa ee Internetka.
Inta badan lahaa computer desktop ah dhiseen “56 kbits-modem” taas oo iyana ahaa ku xiran Jack phone a. Iyo nimcada waxaa markaas soo gaaray telefoonka halka fadhiya oo sugaya shan daqiiqo page Web ah lagu shubto laga yaabo! Waxaa laga yaabaa in marka hore soo maray e-mail xarunta Beddelashada Anund Farm?
Nasiib darro dadka deggan Holm, sidaa darteed marnaba saldhigga in la casriyeeyay badan si degdeg ah ADSL-tekniken Bilaabey hore 00 ee, markii Telia ama shaqaale kale oo kasta oo loo arko waxa ay qiimo. dayrta 2005 ahaa shootali oo ka slide in Anundgård dugsiga ka dibna ay ahaayeen sidoo kale la weydiiyay Anundgårdsbor haddii ay aad u xiiseeneyso ku biiro, 15 oo qoys sameeyey. sano ka dib, xataa technology mobile 3G, taas oo macnaheedu yahay in dadka intooda badan tagay jir xiriir Internet ay garaac-up via Jack phone.
ka dib ku dhawaad 40 sano adeegga Anund Farm saldhigga telefoonka dhawaan in la culsu doonaa
Waxaa maanta uu noqon doono sanado badan tan iyo markii qof la soo dhaafay surfed leh "56 kbits modem" via Jack telefoonka, halka in xaaladda hadda jirta ayaa weli ku hareeraysan 40 macaamiishu isticmaalaya Jack telefoonka telefoonada guriga by saldhigga Anundgård.
links la xiriira
go'aan December 2016: gargaarka lagu siiyo for fiber in Holm! Holmbygden.se
Holm Association Dhaqaalaha Fiber. Saxiix halkan!
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xiritaanka / "network mustaqbalka" ayuu. Telia.se
4G-sayidkiisa ilaa Holmbygden! Holmbygden.se
Isbeddelka ku isgaarsiinta- iyo shabakadaha internet, Post & Telecom Agency
qaad Telia go'an taleefoonka ee Loviken 2012, Holmbygden.se